Ngingowokugcina we-Cisco I-Prize Finalist - Sicela Usekele Umbono Wethu | Martech Zone
Ngingowokugcina we-Cisco I-Prize Finalist - Sicela Usekele Umbono Wethu
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 4, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Akuvamile ukuthi ithuba lifike kanjena - ithuba lokuwina ama- $ 250,000 futhi usebenze nenkampani efana nayo Cisco ukwenza umbono wakho ube ngokoqobo!
Ngaphambi kokuqhubeka, singasebenzisa ukwesekwa kwakho. Yize uhlelo lwethu lokusebenza selufinyelele kumaFinal, sibheke ukukhanya ngamavoti. Uma ukuvota kusavuliwe, singabonga uma ungasibhalisa bese usivotela:
Bhalisela Iwebhusayithi Yomklomelo KaCisco
Ngena ngemvume bese uqhafaza ku- "Phromotha" kumqondo we-SaaS POS.
Uyini Umklomelo We-I?
Chofoza ukuze uthole i- Umklomelo weCisco I ividiyo
Kade ngisebenza embonini ye-Restaurant isikhathi eside ngokwanele manje ukuze ngibone ukuthi enye yezinkinga ezinkulu abadliwayo ababhekana nazo yikhono lokuthola nokwamukela ubuchwepheshe kalula futhi ngokungabizi. Uma sitshelwa iqiniso, imboni iyisidala… Izinhlelo zePoint of Sales zizobiza ngaphezu kuka-10% wezindleko zokuqalisa izinkampani futhi amakhono ezinhlelo akhawulelwe kakhulu.
Inkampani engiyisebenzelayo njengamanje ibingumholi ekuhlanganiseni i-Online Ordering nezinhlelo ze-POS. Kuyinselele emangalisayo, noma kunjalo. Izinhlelo ze-POS, okungenani, ziyiminyaka eyishumi emuva kwezobuchwepheshe futhi azilungele ngokuphelele i-ecommerce ngewebhu. Esikhundleni sokuvula amasistimu abo ekuhlanganisweni kwe-inthanethi, izinkampani ze-POS manje zidinga izindleko ezengeziwe zamalayisense ngezici ezingathembekile nezingaphelele, okubangela ikhanda langempela ezinkampanini ezinjengami kanye ne-restaurateur.
Ngenkathi izinhlelo zeHhovisi, Izicelo ze-imeyili kanye nezinhlelo Zokulawulwa Kobudlelwano Namakhasimende sezithuthele kwiSoftware njengoSizo, izinhlelo ze-POS bezingakabi njalo kuyithuba elihle manje njengoba izinkampani eziningi zithatha igxathu ekutholeni izixazululo ezisingethwe. Ngalokho engqondweni, ngithumele umbono wami kuwebhusayithi yeCisco, i- SaaS pOS. Umqondo ukuthatha isoftware ye-POS yamanje bese uyiqhuba kusuka kwi-Intanethi kunokuba kuthathwe kwi-POS hardware.
Izinzuzo ziningi - ukuhlanganiswa ne-Online Ordering kuba nekhono. Futhi, kuvela amathuba amasha, njengamaholo, amabhange, ukuhlanganiswa kokumakethwa kwe-imeyili, ukuhlanganiswa kwamaselula, ngisho nempahla yomkhiqizo (ukuphuma kwe-salmon kuveza isexwayiso esicela umphathi ukuthi a-ode okuningi. Uyavuma futhi i-oda lithunyelwa ngekhompyutha).
ICisco isinikeze ithuba eliyisimanga lapha futhi ngingajabula ukubona umbono uzuza. Angikholwa ukuthi kunenkampani efanelekile ukusiza ukuthuthukisa nokwethula umbono onje emakethe. Ingqalasizinda yenethiwekhi iyadingeka, ukuphepha, ubuchwepheshe bamakhasimende abancane… konke lokhu kungamandla eCisco!
Gcina iso Ibhulogi likaCisco I-Prize ngemininingwane eyengeziwe.
Futhi ungakhohlwa ukukhuthaza umbono wethu !!! Iqembu liqukethe mina, uBill Dawson, UCarla Ybarra-Dawson futhi UJason Carr.
Tags: CiscoUmklomelo we-ciscocisco iprize
Thatha iKnotice! Ukuvala Izikhala Zezobuchwepheshe Bokumaketha
Ngo-Apr 4, i-2008 ku-6: i-25 PM
Ngichofoze ku- Phromotha! Ngiyethemba kuyaphumelela.
Ngo-Apr 4, i-2008 ku-6: i-38 PM
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho, Shawn! Ngicabanga ukuthi sinohlelo lokusebenza olungokoqobo olunamathani amaningi okushintsha isimo sendawo. Sibonakale singatholi ukunakwa okuningi ngaphandle kwamajaji, noma kunjalo, ngakho-ke ngizama ukufaka amavoti athile.
Ngo-Apr 5, i-2008 ku-8: 55 AM
Ngisebenzise imizuzu eyishumi yokugcina ngizama ukudala i-akhawunti kuleyo sayithi futhi ngikuvotele. Lapho sengidlulile kuzidingo zobuhlanya zephasiwedi, bengilokhu ngithola izikrini zephutha le-ASP lapho ngizozama ukuhambisa.
Ngizozama futhi emuva kwesikhathi futhi ngethemba lokuthi ngingangena! Uxolo!
Ngo-Apr 5, i-2008 ku-9: 13 AM
Nami ngicabanga ukuthi umqondo muhle kakhulu. I-Intuit ikwenze lokhu nge-software ye-accounting eminyakeni embalwa eyedlule futhi iyithuluzi elihle lezindawo zokudlela.
Ngeshwa, angicabangi ukuthi ungowokuqala ukuthuthukisa umqondo onjalo. Ngiyazi ngezinkampani ezimbalwa ezisebenza ngomqondo njengamanje. Ngizokuvotela. Amandla nezinsizakusebenza zeCisco zidlula kude zonke izinhlelo zokudlela ze-POS zihlangene!
Ngo-Apr 5, i-2008 ku-11: 05 AM
Kuzwakala njengokuthile okusazodinga ukusebenza okuhle kohlangothi lwamakhasimende, mhlawumbe usebenzisa i-Adobe AIR? Noma lokho bekungeke kube yi-Cisco-ish ngokwanele?
Ngo-Apr 5, i-2008 ku-11: 16 AM
UMike - uqinisile, isitolo sedatha yasendaweni kungaba yinto edingekayo uma kwenzeka ukuxhumana kungasebenzi. EMOYENI empeleni bekungukukhuthazwa kokunquma ukuthi lokhu bekungaba khona yini noma cha. I-AIR nakanjani izokwenza iqhinga, kepha uma iCisco ithuthukisa iklayenti elincanyana, lokho bekuzosebenza kahle futhi!
Ngo-Apr 6, i-2008 ku-3: 42 AM
Lokhu kuhle - inhlanhla. Uma uwina, ngithanda ukuxoxelwa isiza sami 😉